देशव्यापी अन्तर वडा टेनिस प्रतियोगिता: भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले मुख्य प्रायोजन गर्ने « News24 : Premium News Channel
देशव्यापी अन्तर वडा टेनिस प्रतियोगिता: भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले मुख्य प्रायोजन गर्ने
काठमाडौं, ४ फागुन । स्पिन इभेन्ट्स प्रा.लि. को आयोजनामा हुने देशव्यापी अन्तर वडा टेबलटेनिस प्रतियोगितालाई भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ ।
स्पिनका अध्यक्ष सुमन शाक्य र भ्यालीका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र महर्जनले सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार भ्यालीले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि लाग्ने कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब १९ लाख ५० हजार खर्च हुने स्पिनका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी गराए । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्न लागिएको प्रबन्ध निर्देशक महर्जनले बताए ।
सोही अवसरमा प्रतियोगिताको सह–प्रायोजकमा पूर्णशंकर श्रेष्ठ, सम्झना लेबोरेटरी र बाबुरत्न कन्स्ट्रक्सन रहेको जानकारी दिइयो ।
प्रतियोगिता चैत २ देखि ७ गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुँदैछ । ६ स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा करिब १ हजार खेलाडीको सहभागिता रहने छ । प्रतियोगितामा पुरुष÷महिला सिंगल्स, भेट्रान सिंगल्स ४० वर्षमाथि र ५५ वर्षमाथि तथा पुरुष÷महिला टिम इभेन्टमा खेल हुने छ ।
सिंगल्समा शीर्ष १६ वरीयतामा रहेका खेलाडीले सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । पुरुष÷महिला सिंगल्समा पहिलो हुनेले ३० हजार, दोश्रोले १५ हजार र तेश्रोले ७ हजार ५ सय नगद पुरस्कार पाउने छन् । भेट्रानतर्फ शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र २ हजार ५ सय नगद पुरस्कार पाउने छन् । टिम च्याम्पियन वडालाई ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले प्रतियोगितामा संघको प्राविधिक सहयोग रहने बताए ।